ဦးဂင်ကြီး: When the children cry- (ဂင်ကြီး)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 5:31 AM
အောင်သာငယ်, January 16, 2009 at 5:59 AM
ဘာလို့ သိပ်တော့ မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာလဲ...
ဒီလောက် အရမ်း ကောင်းနေတာကို...
အဆိုလေး ထည့်လိုက်ရင် ပြီးပြီ...း)
sin dan lar, January 16, 2009 at 6:14 AM
Craton, January 16, 2009 at 9:17 AM
သားသားဆိုပေးမယ်လေ.. ဦးဂင်ကြီးကတီးးP
ကမာနီလာ, January 16, 2009 at 10:04 AM
ကိုဂင်တီးထားတာလေးက ကောင်းတယ်၊ ခံစားလို့ ကောင်းတယ်၊ နောက်ဆိုအသံလေးနဲ့ပါ လုပ်ကြည့်ပါလား
ဆောင်းယွန်းလ, January 16, 2009 at 5:12 PM
ခေါင်ခေါင်, January 16, 2009 at 6:02 PM
ဂစ်တာသံ လေး လာနားထောင်သွားတယ်... ဦးဂင်ရေ....
အသံမပါတော့... ဘာလိုနေမှန်း မသိ.. :P
ကောင်းကင်ကို, January 17, 2009 at 12:44 AM
ခံစားသွားတယ်ဗျ။ နဂိုဓာတ်ခံရှိတဲ့သူဆို မျက်ရည်ကျနိုင်တယ်ဗျာ။ စစ်ပွဲရဲ့ ဓားစာခံကလေးတွေ သနားပါတယ်ဗျာ။
ယောနသံစင်ရော်, January 17, 2009 at 8:18 AM
ဦးဂင်. .. ဂစ်တာတီးသင်ပေးပါဗျို့!!!!
ဒူကဘာ, January 18, 2009 at 6:06 AM
ွှဒေါက်..ဒေါက် ...ဒေါက် ..ဗျိူ့ ဦးဂင်ကြီး...သူ့ကလေး တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ သေသွားတာအတွက် စပ်ဆိုထားတဲ့ အဲလ်ရစ် ကလက်(ဖ်)တန်ရဲ့ Tear from Heaven ပြန်နားထောင်ချင်တယ်ဗျို့....
maw k o e, January 19, 2009 at 8:11 AM
pandora, January 20, 2009 at 2:14 AM
ဟုတ်တယ်။ နောက်တခါဆိုရင် အဆိုပါ ထည့်ပေတော့။
တောင်ပေါ်သား, January 20, 2009 at 8:25 PM
အကိုရေ အတီးလေးကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျနော်က ဘာမှ တီးတတ်ဘူးဗျ
အိမ်, January 22, 2009 at 5:46 AM
ဒါလေးလဲ လိုချင်တယ်ဗျာ နော ပို့ပေးဗျာ
ဟုတ်တယ် ကိုဝင်ကြိးရေ ကလေးတွေဟာ
တကယ်တော့ မြေဇာပင်လေးတွေပါ ဒါပေမဲ့ဗျာ
ဒါတွေတွေးမိရင် ခံစား၇တယ်ဗျာ လူမဆန်တဲ့
လူတွေ ရှိနေသမျှ သူတို့လေးတွေ ဒီဘ၀မကျွတ်